मधुमेह निको पार्ने करेलाका यस्ता फाइदा – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Health/मधुमेह निको पार्ने करेलाका यस्ता फाइदा
करेला तपाइँले तरकारीको रुपमा खाने गर्नु भएको होला । तरकारीको रुपमा करेलाको प्रयोग स्वास्थ्यका हिसावमा निकै फाइदाजनक रहेको हुन्छ । अझ यसलाई धेरै नपाइकन वा काँचै प्रयोग गर्दा थप फाइदा मिल्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
तिते करेला तरकारीका रुपमा हामीले प्रयोग गर्दै आए पनि यसले मानव स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने फाइदाबारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । तीते करेलामा प्रशस्त मात्रामा औषधीय गुणहरु हुन्छन् ।
ग्लूकोजले कोशिकाहरूमा उर्जा ल्याउने गर्दछ । जसले क्यान्सरको रोग विस्तार गर्दछ । ग्लूकोजको प्रवाह बन्द हुनाले क्यान्सरका कोशिकाहरू अन्त्य हुन थाल्दछन् ।
मधुमेहका बिरामीले कसरी प्रयोग गर्ने करेला ?
मधुमेह हुनेलाई करेलाको सब्जी जुस र विशेष गरेर धुलो धेरै प्रभावकारी हुन्छ । करेला अग्नाशायलाई उत्तेजित पारेर इन्सुलिनको स्त्रावलाई बढाउछ । करेलामा प्रयाप्त मात्रामा इन्सुलिन पाइन्छ । सो इन्सुलिन पिसाब र रगत दुबैलाई नियन्त्रणमा राख्ने गर्दछ । हेरौ मधुमेहमा करेलाको प्रयोग कसरी गरेर डाइविटिजबाट राहात पाउन सकिन्छ ।
पहिले ४ वटा करेलालाई लिनुहोस् । सो करेलालाई नतासिकन तिन भागमा काट्नुहोस । काटिएको करेलाको एक भागलाई सय ग्राम पानि मिसाएर जुस बनाउनुहोस । सो जुसमा आधा कागति निचोर्नुस् र स्वाद अनुसारको नुन राखेर पिउनुहोस । यसरीनै बाकि रहेका दुई भाग करेलालाई दिउसो र बेलुका गरेर पिउनुहोस । दैनिक तीन पटक जुस नियमित तिन महिना सम्म पिए डाइविटिजबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
करेलाको तरकारी पकाउदा करेलालाई नतासिकन बनाउनु पर्दछ ।
करेलाको सिजनमा २० केजि राम्रो करेलालाई सफा पानिले धुनुहोस । यसरी धोएको करेलालाई मसिनो हुने गरि काट्नुहोस र घाममा सुकाउनुहोस् । सुकेको करेललाई मसिनो गरेर पिस्नुहोस र हावा नछिर्ने बट्टामा राख्नुहोस ।
यस धुलोलाई बिहान एक चम्चा दिउँसो एक चम्चा र बेलुका गरि दिनमा तीन पटक चिसो पानिमा राखेर पिउनुहोस । मधुमेबाट लाभ पाउनुहुनेछ । करेलालाई सुकाएर राख्दा पनि यसको गुण नष्ट हुदैन ।
धेरै रोगको औषधी सिस्नोका फाईदाहरु र प्रयोग गर्ने विधि
उच्च रक्तचापबाट पीडित हुनुहुन्छ ? हरेक दिन यसरी खानुस् लसुन